Erayoxul, ereyga Mawduuca iyo SEO
Khamiista, Noofembar 10, 2011 Khamiis, Juun 18, 2013 Douglas Karr
In badan ayaan dadka u sheegay in maahmaahdii hore ee suuqgeynta ay quseyso waxyaabaha sidoo kale. Soo noqnoqoshada, soo noqnoqoshada iyo qiimaha waxa ku jira waa furaha. Tani waa sababta hubkaa waa furaha istiraatiijiyadda suuqgeynta waxyaabaha content waxay kuu oggolaaneysaa inaad wax qorto badanaa. Jaantuska hoose wuxuu ka socdaa mid ka mid ah macaamiisheena. Waxaan hagaajinay boggooda oo, oo ay weheliso xoogaa dhiirrigelin ka baxsan goobta, waxay ku boodboodeen qiimeynno aad u sarreeya.
Si kastaba ha noqotee, dhowr bilood ka dib helitaanka waxyaabo cusub oo ku saabsan ereyada muhiimka ah ee kala duwan way adkaatay. Kooxda wax qoraysay waxay ahaayeen kuwo aad u mashquul badan marka waxaan u kireysanay qoraa ka kooban. Intii shirkaddu diiradda saartay badeecadeeda iyo warkeeda, nuqul-qorahayagu wuxuu diiradda saaray talooyinka guud iyo hababka ugu fiican ee warshadaha. Waxaan si fudud u bixinnay dhowr mowduuc oo leh ereyo muhiim ah oo aan ciriiri gelin, iyo voilà!
Shaxdu waxay ka timid Xeebaha, oo qabta darajooyinka darajooyinka ugu sarreeya ee 60 million keywords keywords. Kaliya maahan macmiilku inuu kordhiyo tirada ereyada muhiimka ah ee ay ahaayeen darajayn loogu talagalay, sidoo kale waxay hagaajiyeen darajadooda guud sidoo kale. Ha u oggolaan in bartaadu ay ku xumaato waxyaabaha ku jira.
Bixinta waxyaabaha dhowaan soo noqnoqda, kuwa soo noqnoqda oo qiimo leh kaliya ma wadi doonto booqashooyinka, waxay sidoo kale kaa caawin doontaa hagaajinta mashiinka raadintaada!
Tags: Content Suuqkeywordsayna search engineSEO
Google iyo Facebook oo ku saabsan asturnaanta
Nov 10, 2011 saacadu markay tahay 5:51 PM
Doug, ok, miyuu ahaa nuxurka si gaar ah kor ugu qaaday cabirradooda, ama tallaabooyinka dadku qaadeen markii ay arkeen waxa ku jira? Xaqiiqda waxaa dib iigu jiiday boostadaada “Lambarada Arrinta” (https://martech.zone/numbers-matter/ ). 😉 Yooxanaa
Nov 10, 2011 saacadu markay tahay 5:54 PM
Xaaladdan oo kale, iyagu kuma ay koobnayn ereyada kale ee muhiimka ah ee ay ahayd inay ku kala sarreeyaan. Marka la soo koobo, ma kala sarreyn kartid isku darka ereyada muhiimka ah adigoon dhab ahaan lahayn bogag iyaga sheega! 🙂